१३ औं सागको मुखैमा महर्जनको दावीः कम्युनिष्टकै कारण नेपालले पदक जित्न सक्दैन !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शुक्रबार, कार्तिक ८, २०७६
काठमाडौँ-काठमाडौं–दिपावली न्हुदायाँ भिन्तुना र र छैटपर्वको उपलक्ष्यमा कराते बेल्ट बितरण डेमोष्ट्रेशन तथा सांकृतिक कार्यक्रमको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पुर्ब कोषाध्यक्ष करातेका पुर्ब अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा नेपाली कांग्रेसका युबा नेता मीन कृष्ण महर्जनले उट्घाटन गरेका छन् ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ लेलेको गंगा जमुना आवासीय माध्यमिक बोर्डिङ स्कुलमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू पनि बाल्यकाल देखि नै करातेमा लागेर राष्ट्रिय खेलाडी हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीका साथै खेलकुद परिषदको सर्बोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कोषाध्यक्ष समेत भएको महर्जनले बताए।
उनले अहिले पनि आफ्नो नशा–नशामा खेलकुद भएको बताएका छन्। उक्त स्कुलका खेलाडीहरुलाई पनि कराते खेलमा लागेर देशको नाम राख्न उनले शुभकामना दिएका छन् ।
‘नेपालमा यहि डिसेम्बर १ देखि १३ औ सागगेम हुदैछ। उद्घाटनको पहिलो दिन करातेको गेम हुँदैछ। नेपालको खेलकुदको प्रतिष्ठा भनेकै यहि कराते नै हो,’ उनले भने, ‘तर करातेको नेतृत्व विवादका कारण सागगेम खेल्ने खेलाडीहरु मानसिक तनाबमा छन् ।
यतिखेर वैदेशिक प्रशिक्षणको लागी बिदेश पठाउन अति आवश्यक छ। किनकी नेपाल को ट्रेनिङ्ले मात्र पुग्दैन । प्रत्येक बर्ष करातेको नियम र टेक्निक चेन्ज भई रहेको हुन्छ। मेडल ल्याउनको निमित्त खेलाडीहरुले नयाँ–नयाँ टेक्निक सिक्न जरुरी छ।’
उनले करातेका नेतृत्व कर्ताहरु आ–आफ्नो नजिकका कोच र ब्यबथापक छान्न व्यस्त रहेको उनको आरोप थियो । ‘नेपालको लागि यो अबसर पनि हो। किनकी नेपाल मै सागगेम हुदैछ। करातेमा जम्मा ४ देशले मात्र सहभागिता जनाउदै छ।
यस्तो बेलामा पनि यिनिहरु कुर्सिको लागी लडाई गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कोहि त करातेलाई नै ब्यबसाय बनाएर खाइरहेका छन् । कोहि बिदेशमा ८, १० बर्ष काम गरेर तन्न पैसा कमाएर राजनितीको आडमा हैकम चलाई रहेका छन् । कोहि कराते गेमको नाममा मेनपावर धन्दा चलाई रहेका छन।’
‘नेपालमा भएको ८ औं साफगेममा करातेले १४ वटा स्वर्ण पदक ल्याएको थियो। अहिले करातेका नेतृत्व विवादका कारण खेलाडीहरुले बिगत आठौं साफगेमको जस्तो रिजल्ट नआउने निश्चित छ।
त्यसपछि यी करातेका नेतृत्व माथी प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ कि हुन्न ? अनि खेलकुद परिषदले यी तदर्थबादमा चलेको कराते महासंघ बिगठन गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले थपे ।
महर्जन खेलकुद जगतमा निकै परिचीत मानिन्छ। महर्जनसँग खेलकुदको लामो अनुभव छ। महर्जनले कराते खेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा ३ दर्जन भन्दा बढी स्वर्ण पदक हासिल गरिसकेका छन् ।